Dhamaadkee Shaqada Iibka? | Martech Zone
Dhamaadkee Shaqada Iibka?
Isniin, Janaayo 16, 2012 Axad, Agoosto 19, 2012 Douglas Karr
Xeeladaha suuqgeynta badanaa waxaa loogu talagalay in la helo dheeraad ah hogaamiya ama kor u qaada macaamiisha hadda jirta. Mid ka mid ah arrimaha aan inta badan ka helno macaamiisha ayaa ah inay inta badan ka shaqeeyaan dhamaadka qaldan ee qafiska iibka. Shirkado badan ayaa soo booqdayaashu ka yaryihiin bishii degelkooda intay doonayeen… laakiin hadday awoodaan inay laba jibbaaraan tirada booqdayaashaas ay haystaan, aad bay u guuleysan lahaayeen.
Farsamooyin badan oo aan la shaqeyno waxaa loo dhisay si loo soo gaabiyo waqtiga loo baahan yahay si loogu beddelo dhagaystayaasha la bartilmaameedsaday ama loo kordhiyo heerka beddelaadda dhibic kasta oo uu qulqulaya qulqulaya. Waxaan marwalba layaabaa inaan ugu yeerno funnel really runtii waa wax badan oo colander ah oo leh rajo weyn oo ka daadanaysa meesha oo dhan. Halkii aad ka shaqeyn laheyd dusha sare ee mashiinka oo aad wadid horseedyo badan oo god ah oo godad ka buuxsan yihiin, halkee ka isticmaali kartaa tikniyoolajiyadda qolka?
Waa kuwan qaar ka mid ah teknoolojiyada… oo ay ku jiraan qaar ka mid ah macaamiisheena iyo kafaala qaadayaasha caawiya:
Maamulayaasha shabakada aaladaha waxay bixiyaan macluumaad muhiim ah si ay kaaga caawiyaan inaad kordhiso sicirka gujinaya-makiinadaha raadinta. Waxaad durbaba fiiro gaar ah u leedahay inta raadinta taraafikada ay keeneyso bartaada, laakiin ma ogtahay waxa gujiska illaa heerka uu ku yaal qiimeyntaada hadda? Ma la horumarin karaa?
Gaabiyaha URL sida Bit.ly ayaa ku siin kara xogta aad u baahan tahay si aad u aragto sida ay waxtarka ugu leeyihiin xeeladahaaga warbaahinta bulshada. Ma ogtahay in Facebook uu shaandheeyo waxyaabaha ay dadku arkaan iyagoo isticmaalaya Edgerank algorithm… waxayna ku keeni kartaa wax yar ama xitaa ma jiro dadaalkaaga warbaahinta bulshada dhab ahaantii la soo bandhigay?
Shirkadaha otomaatiga suuqgeynta sida Right On Interactive waa soo saarida tikniyoolajiyad soo gaabinaysa meertada isla markaana bixisa habab kaa caawinaya inaad dhibcaha hogaamiyaashaada si aad awood ugu yeelato inaad ula xiriirto si wax ku ool ah halkii aad Dufcaddii iyo qarax hababka laga yaabo inay kexeeyaan waxay horseedaan masaska.
Shirkadaha suuq geynta emaylka sida Delivra oo kale waxay u soo bandhigtaa emayl iyo adeegyo SMS ah oo si weyn u kordhin kara heerarka jawaabta iyo sidoo kale inay wax ku bartaan macaamiisha hadda jira sida wax soo saarkooda ama warshadeynta - maamulka dhisidda, haynta iyo fursadaha helitaanka ay la socdaan hoggaanka.
Meelaha sahaminta internetka sida SurveyMonkey (oo soo iibsaday macmiilkayaga, Zoomerang) ayaa ku siin kara caqliga loo baahan yahay si aad si mug leh loogu hagaajiyo istiraatiijiyadda suuqgeynta waxyaabaha aad ka kooban tahay. Markaad hagaajiso waxyaabahaaga, waxaad awood u leedahay inaad si kalsooni leh u bartilmaameedsato raadinta helitaanka oo aad hubiso in macaamiishaada si habboon loogu adeego.
Soo jeedinta barnaamijka codsiyada sida Tinderbox waxay kuu oggolaanayaan inaad hagaajiso oo aad horumariso hannaanka soo-jeedintaada. Raadinta jawaabahaaga iyo fahamka sida loo hagaajiyo soo jeedintaada, waxaad awoodi kartaa inaad waddo beddelaad si dhakhso leh oo waxtar leh… dhammaan adoo adeegsanaya ilaha gudaha.
Markaad eegto Meheraddaada Iibinta, meeye xeeladihiina dejinta? Halkii aad isku dayi lahayd inaad kaxeyso dhagaystayaal aad iyo aad u tiro badan, waxaa jira suurtogalnimo wanaagsan oo aadan ka faa'iideysan doonin macaamiisha iyo rajooyinka aad horey u laheyd. Waa u qalantaa fiirin!
Tags: delivraEmail Marketingsuuq-geynta suuqasaxda ah is-dhexgalkaiibinta jilitaankasoo jeedinta iibkasantuuqa
Tijaabinta Isku-xirka Browser-ka oo Fudud
Taariikhda Teknolojiyadaha Carqaladeeya ee Suuqgeynta
Tani waa run Douglas. Tan ugu horreysaana waxay tahay inaan aad uga helay akhrinta maqaalkaaga. si aad u wado dad badan oo dhagaystayaal ah, waxaa macquul ah inaadan ka faa'iideysan macaamiisha iyo rajooyinka aad horey u laheyd. Hal shay oo aan bartay ka hor intaanan noqon qoraa caan ah muddo dheerna ka hor inta aan Inc Magazine u codeyn shirkadeyda mid ka mid ah shirkadaha ugu koritaanka badan waa in iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyadaan mid xaqiiqo ah ay u heli karto dhagaystayaal badan oo ka tirsan websaydhka suuqgeynta internetka.
Aad baad ugu mahadsantahay ereyadaada wanaagsan, @DanielMilstein: disqus! Oo kaliya ka fikir intee buuq yar oo buuq ah ayaa jiri laheyd halkaas haddii aan diirada saareyno rogida jihooyinka aan heysano halkii aan ku daadin laheyn spam badan oo badan.